Astaamaha kuwa raacsan ee kamaradaha (oo ay ku jiraan kuwa dhaqdhaqaaqa toosan) - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Xaddidan
Astaamaha kuwa raacsan ee camalka ah (oo ay ku jiraan kuwa loogu talagalay dhaqdhaqaaq qumman)
Dhexdhexaadiyaha banaanka (OD) ee kantaroolka dhejinta ayaa ah wajigeeda shaqada - sida caadiga ah laga sameeyey birta, nayloon, ureterane, polyamide, ama qalab kale oo injineer ah. OD-da Tani waxay ku xiran tahay muraayadda muraayadda qaar ka mid ah tani waxay ahayd nooca farsamada nooca qaar ka mid ah - sida foornada saxda ah ee miis fadhiga. Miisaska mishiinka mishiinka ah ee mishiinka ah waxay leeyihiin hannaanka mawduucyada dhaqdhaqaaqa ah ee gawaarida kamaradaha ah oo soo dhex gali doona kuwa raacsan, oo markaa u gudbiya awooda wax soo saarka.
Kuwa xayawaanka xitaa waxay sidoo kale ka helayaan isticmaalka kiniisadaha kuwaas oo u dhigma wadooyinka qadka toosan iyo waddooyinka kale ee la mideeyey ee looxyo loogu talagalay kiniisado loo habeeyay.
Kuwa xajinta leh waxay isugu yimaadaan mishiinnada mid ka mid ah labada siyaabood. Dabeecadaha xayawaanka ah ee xayawaanka waxaa ka mid ah qayb qafiif ah oo qoorta loo xiray si loo raaco dhexdhexaadiyaha gudaha (ID) ee loogu talagalay isu-imaatinka muraayadda oo leh lowska ama qalab isku xiran oo la mid ah. Kala duwanaanta xayeysiinta xawaaraha (aqoonsiga aqoonsigooda furan) inta badan waxay ku xiran yihiin mashiinka mashiinnada iyadoo la adeegsanayo cadaadis ku habboon tartanka jilicsan ee jilicsan sida caadiga ah ee lagu haysto taarikada dhammaadka leh. Sababtoo ah iyagu ma ahan qaab naqshadeysan, kuwa raacsan harqoodka waxay muujiyaan qulqul hoose. Laakiin raacayaasha xayawaanka ah waa wax aan lagama maarmaan u ah arrimo badan oo codsiyada - oo ay ku jiraan kuwa ku xiran culeysyo badan.
Naqshadda ugu caansan ee kor loo yaqaan "cam-follower" waxay shaqaaleysiisaa wareegyo irbad si ay u qaadaan culeysyo culus; halkaasoo codsiyada u baahan yihiin fiilada si ay ugu orodaan xawaare sare, qafis ayaa kala saari kara wareegyada.
Meeshii culeysku aad u sarreeyaa iyo fiiladu waxay ubaahan tahay awood fulin hawleed sare leh, raacayaasha kamaradu waxay ku jiri karaan galka matoorada qadaadka. In kasta oo ka sii fogaanshaha diiradda halkan, qaar ka mid ah taageerayaasha xayawaan-gacmeedka ayaa xitaa lagu dhajiyay wareegyo fudud.
Xassuuso in dadka raacsan ay ka duwanyihiin ilma adeer oo adeer ah oo siyaabo kala duwan ah. Sababtoo ah ugu dambeyntii ayaa ah dhexdhexaadin ku habboon kulamada, waxay helayaan xoojinta wareega mashiinka ku xeeran ama guryaha. Taa bedelkeeda, tartanka dibadda ee qaansaydhka waa inuu ahaado dhumuc si looga hortago isbedelka - gaar ahaan hoosta xariiqda xawilaadda. Intaa waxaa dheer, kuwa raacsan xajmiga waxaa ka mid ah dekadaha biyaha lagu rido iyo kor u kaca meel sare si ay u hor istaagaan jawiga degaanka inta lagu jiro howlgalka - gaar ahaan kuwa ka shaqeeya qaybaha mashiinka aan la ilaalin.
Dad badan oo xayawaanno badan leh waxay leeyihiin qaabab kala duwan oo dhexdhexaad ah (OD), halka kuwa kale (gaar ahaan kuwa codsiyada tooska ah) ay ku jiraan dhejinta, curyaamiyay, ama OD-ga oo si habsami leh loogu xiro wadooyinka iyo gawaarida la mideeyo joometeriga lagu jajabiyo.
Kuwa xayawaanka leh ee xayawaanka ah ayaa magdhow siin kara toban goor si qalad ah oo loo adeegsado kuwa xajmiga ah ee camaliga ah.
Qaab dhismeedka tooska ah ee loo yaqaan 'foll follower' (muuqaalka dabagalka) sawir leh Geddel US
Qaar ka mid ah mucaaradada kamaradu waxay u adeegaan raacaan raadraac raadraac ah iyaga oo kaashanaya jidadka si ay u bixiyaan dhaqdhaqaaq toosan Naqshadahan ayaa sii kordhaya oo ku badan nidaamyada kaydinta iyo dib u soo celinta (AS / RS) iyo toddoba-xabbadood oo RTUs lagu xusay horraantii.
Taasi waa sababta oo ah nidaamyada qulqulka ku salaysan ee ku salaysan nidaamku waxay ka sarreeyaan muraayadaha tooska ah ee loo yaqaano faahfaahinta sawirada halkaa oo sax ah iyo saxnaansho aad u sarreeya ay ka muhiimsan tahay xajmiga, si deg deg ah iyo qalafsan oo lagu rakibo, dib u dhac degdeg ah, iyo nolol dheer.
Linear 'âlineup' oo cajiib ah Shirkii Robotic ee Bishii Juun: Ka qeybgal aragtiyaha tikniyoolajiyada